HALBEEGGA IYO SIFOOYINKA WANAAGSAN EE MONARDA, NOOCYADA KALA DUWAN EE CODSIYADA IYO KA HORJEEDA - DHIRTA DAWOOYINKA
Monarda - waa baayac udgoon, dhirta qoyska ee ubaxyada isbuunyo. Waddanku waa Waqooyiga Ameerika.
Monarda ayaa muddo dheer loo adeegsaday sidii dhir iyo daawo. Laga soo bilaabo qarnigii XIX, geedo waxaa loo yaqaanay adduunka oo dhan sida bergamot, balsa liin Maraykan ah, ka sameysan liin.
Bergamot Grass Waa geedka sannad ama sanno dilaacsan illaa hal mitir iyo badh. Caleenta dhirta ayaa ah qulqulo-qoyan, toosan oo calsan, kareysa. Ubaxyada dabiiciga ah-bergamot waa kuwo yaryar, waa midabyo kala duwan: caddaan, casaan, guduud, jaalle, lafdhabarta. Waxay ku uruuraan inflorescences ee 6-7 cm dhexroor.
Monarda waxay soo jiidataa midabyo dhalaalaya ubax iyo aromas cajiib ah. Waxaa loo isticmaalaa dhir daawo ah oo lagu karsado, lagu daro shaaha, oo loo isticmaalo daawada dhaqameed.
Waxyaabaha kiimikada ah ee monarda ah
Monarda - Tani waa warshad saliideed oo muhiim ah. Sidaa darteed, qayb ka mid ah qaybaha noolaha firfircoon ee warshadda waa saliidaha lagama maarmaanka ah. Waad ku mahadsantihiin iyaga, Monarda wuxuu ka soo baxaa udambeeyay. Dhirta ayaa sidoo kale hodan ku ah fiitamiinada B1, B2, C, waxay soo saartaa astaamaha amino, qadhaadh, bioflavonoids, tannins, selulose, pectins.
Saliidda muhiimka ah ee Monarda waxaa ku jira qiyaastii 40 qaybood, 16 ka mid ahna waa lagama maarmaan. Inta badan tijaabada saliidda muhiimka ah ee Monarda waxaa ku jira carvacol iyo thymol sida elementka ugu weyn.
Noocyada dhirta kala duwan, waxay ka kooban tahay 41% ilaa 85%. Sidoo kale saliidka lagama maarmaanka ah ee Monarda, waxaa ka mid ah Sabinen, Terpinen, Cymol, Tuyen, Borneol, Tuyol, Linalool, Myrcene, Cyneol. Geedaha noocyada dhirta waxay soo saaraan qaabab kala duwan oo ku kala duwan qaybaha saliidda.
Waa muhiim! Qalabka la qalajiyey waxaa loo isticmaalaa in lagula dagaallamo dulinada gudaha. Qalabka dhirta ee dhirta ayaa ka caawiya in laga takhaluso dhiqlaha iyo cayayaanka kale ee ku quudiya qaybaha maqaarka.
Bogsiinta guryaha ee Monarda
Guryaha bogsoon ee Monarda waxaa bixiya ka kooban kiimikada. Qodobka ugu qiimaha badan ee laga helo geedkan waa saliida muhiimka ah, oo leh ficil bakteeriyadeed oo ah xargo ballaaran. Sidoo kale saliida muhiimka ah ee Monarda waxay leedahay antioxidant, taranka, antiyemiciga, habka difaaca jirka, shucaacaha shucaaca.
Waa hagaagsanahay Qalabka daawada ee antistress ee monarda. Iyada oo daal joogta ah, isticmaalka warshadani waxay saameeysaa nidaamka dhexe ee dareenka, kor u kaciisa, korontada oo muuqata, xoogna waa la soo celiyaa.
Xaaladaha dhirta montere waxaa loo isticmaalaa in lagu dedejiyo habka bogsashada ee cambaarta, gubashada, neefta neefta, iyo salmonellosis. Cudurada Wajiyada, Fungi, Mycoplasmas.
Monarda waxay leedahay guryo daaweyn oo kuu ogolaanaya inaad la dagaallanto gooryaanka. Thymol ku jira geedka ayaa leh tallaabo anthelmintic ah. Laakiin dalbashada dhirta iyadoo lala xiriirayo habab kale si loola dagaallamo dhibaatadan. Monarda sidoo kale waxay hawlgelisaa tallaabada antibiotics, taas oo u ogolaaneysa in ay yareeyaan tirada isticmaalka.
Isticmaalka montere ee daawada dhaqanka
Daawada dadweynaha, isticmaalka Monarda waa caan. Saameyn wanaagsan ayaa lagu arkay cudurrada maqaarka, mareenka caloosha, dhibaatooyinka habka dhexe ee neerfaha, cudurada dumarka, cudurada fungal.
Joogitaanka qaybo badan oo ka mid ah qaybaha bayolojiga firfircoon waxay suurtogal u tahay isticmaalka Monarda in homeopathy. Meelahan, waxaa loo isticmaalaa si gaar ah oo cusub. Qaybaha dhirta ayaa leh saameyn liddi ku ah antimicrobial, si wanaagsan u saameeya hababka dheef-shiidka.
Ma taqaanaa? Daawooyinka, waxaad isticmaali kartaa shinni saliid ah ee Monarda. Waxaa lagu diyaariyaa guriga iyadoo la gelinayo warshad qallalan oo ku jirta weel leh saliid khudradeed oo lagu cabiro 1:10, kululaynta kuleylka ilaa 60 darajo laba saacadood. Saliideedka ayaa loo isticmaalaa rhinitis iyo daaweynta nabarrada.
Isticmaalida decoctions ee Monarda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kiciso nidaamka difaaca. Qalabkan waxaa loo isticmaalaa hargabka, si looga hortago. Monarda waxaa lagu daadi karaa shaaha.
Dhiig karka, indhaha oo la raaciyo monarda ayaa la tilmaamayaa. Waxaad sidoo kale ku dhaqi kartaa boogaha jirka oo dhan, ku sameeya dhareer, iyaga oo xoojiya bogsashadooda.
Marka cudurka afkiisa, cirridka, cunaha ayaa la isticmaalaa tincture of monarda. Kala saaridda tincture waxay ku darsataa bogsashada degdegga ah iyo bogsashada boogaha iyo boogaha on xuubka xabka. Waa faa'iido leh in la sameeyo gargles oo leh halbeeg leh angina.
Haddii ay dhacdo cudurrada cudurada wadnaha ee barara, shimbiraha ayaa la isticmaalayaa. Waxa kale oo jira daawooyin ay ku jiraan monarda, oo loo qoro cudurrada noocaas ah.
Isticmaalka joogtada ah ee Monarda waxay ka caawisaa in la yareeyo heerka kolestaroolka ee dhiigga ku jira, taasoo ku kordhinaysa habka caadiga ah ee waxqabadka unugyada. Waxaa jira isbeddel tartiib tartiib ah oo ku yimaada xididdada iyo xididdada dhiigga oo ka yimaada jimicsiyada atherosclerotic.
Ma taqaanaa? Monardo qaabka saliidaha lagama maarmaanka ah waxaa loo isticmaalaa "nadiifiye" hawo ka soo jeeda jeermiska iyo bakteeriyada jiran. Inta lagu jiro cudurada faafa, waxaa aad u faa'iido leh in lagu daro nalalka arooska.
Monarda ee kookhoolojiyada waxaa loo isticmaalaa qaab saliid saliid ah, decoctions. Dhibaatada dhalinyarta, finanka iyo cudurrada kale ee maqaarka, oo ay ku jiraan fangaska cagaha, ayaa sidoo kale lagu xalliyaa isticmaalka dibadda ee decoctions, tinctures oo ay ku jirto monica ku jira. Si wax ku ool ah ayaa loo isticmaalaa si loo tirtiro dhibaatooyinka oogada oilyada, daaweynta cagaarshow.
Laga soo bilaabo decoction ee maskadaha dhirta waxaa loo diyaariyey leh dheeriga ah ee dhoobo buluug ama caddaan. Si aad u karisid decoction, Waxaad u baahan doontaa 2 qaado oo ah walxo cayriin iyo 200 ml biyo karkaraya. Isku dariddu waxay ku adkaysataa 10 saacadood darmuuska. Decoction Tani waxay ku habboon tahay in la dhaqo, si loo joojiyo geedi socodka bararka ee dhuumaha maqaarka.
Saliid subag sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu daayo da 'weyn. Miisaaniyada joogtada ah ee isticmaalaya shidaalkan dib u cusbooneysiiya unugyada waxayna hoos u dhigaan geedi socodka gabowga.
Monardo waxaa lagu daraa kiriimyada, alaabta daryeelka maqaarka ka dib markii qorraxda hoos loo dhigay, khadadka gabowga. Isticmaalka badeecooyinka leh qaybtaan ayaa soo saaraya maqaarka.
Sida loo isticmaalo bergamot ee karinta
Ma aha oo kaliya in daawada dadweynaha iyo codsiga qurxinta ee monarda horumariyo. Marka aad wax karinayso, geedo badanaa ayaa badanaa la isticmaalaa, laakiin marar badan waxaa loo yaqaan 'bergamot'.
Caleemaha, ubaxyada iyo caleemaha Monarda waxay leeyihiin caraf udgoon leh. Raashinka waxaa loo isticmaalaa qaab cusub oo la qalajiyey.
Tusaale ahaan isticmaalka labba-bergamot ee karinta:
sida rootiga maraqa, suxuunta hilibka iyo kalluunka, saxamada dhinaca, saladhyada;
ee ilaalinta yaanyada iyo qajaarka;
for macaanka macaan, cabitaan miro;
qayb ka mid ah suugada, ku dar pizza.
Suxuunta macaan, bergamot waxaa lagu daraa melissa, qorfe, toon, dufan-oranji.
Diyaarinta alaabta ceeriin ah oo ka timaada moneybar
Qalabka ceeriin ee mukhaadaraadka iyo suxuunta cayayaanka waa qeybta dhulka geedka. Muddada ugu fiican ee goosashada - bilowga ubax. Waa waqtigan geedka ugu muhiimsan ee saliidaha lagama maarmaanka ah.
Cawska gooyaa waa la qalajiyaa hadhka, oo ah meel hawo wanaagsan leh. Qoyaan, qalafsan oo afkoda ah ayaa isla markiiba laga saari karaa, taas oo sahlaysa diyaarinta sii deynta iyo khidmadaha. Walxaha qashinka waa in aan la jajabin, maxaa yeelay waxay dhaawici kartaa qanjidhada saliidda ee muhiimka ah. Haddii tani dhacdo, saliida muhiimka ah ayaa uumi-baxaysa, taas oo si weyn u yareysa waxtarnimada alaabta ceeriin ah.
Waa muhiim! Qadarka saliidda lagama maarmaanka ah iyo saamiga qaybaha ku jira waxay ku kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran xaaladaha sii kordhaya, kala duwanaanta, waqtiga ururinta. Sidoo kale, ka kooban halbeegyada saliidaha lagama maarmaanka ah ee Monarda waxay ku kala duwanaan kartaa xitaa kuwa ka mid ah dhirta hal warshad.
Monarda - mid ka mid ah dhirta ugu faa'iido badan. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka xad-dhaafka ah, waxay kicin kartaa fal-celin xun ee jidhka.
Contraindications in isticmaalka Monarda:
dulqaad shakhsi ahaaneed ee geedka;
da'da 5 sano.
Adiga ma isticmaali kartid saliida lagama maarmaanka ah ee saliidda dabka ku jirta gudaha gudaha caruurta yar yar.
Monarda waxay ka faa'iideysan kartaa laanta la isku qurxiyo iyo daawada. Laakiin ha iloobin sharciyada badbaadada, ka hor inta aanad codsanin waxaad u baahan tahay inaad hubiso in qaybaha warshadu ay si fiican u dulqaataan.